Soco si loo dhammeeyo gaajada - Cuntooyinka giraangiraha
« Dhammaan Dhacdooyinka
Kani dhacdo wuu dhaafay.
Soco si Aad u Dhamayso Gaajada
Noofambar 1, 2021 - November 30, 2021
Subaru La Wadaag Dhacdada Jacaylka »
Socodka lagu Dhamaynayo Gaajada waa socod dhaqaale ururin-fac-ilaa-fac ah oo taariikh ahaan martigeliyay Maalinta Thanksgiving ee Mall of America. Sannadkan, Socodka lagu Dhamaynayo Gaajada wuxuu dhacayaa dhammaan bisha "Nofeembar Gaajo ma jirto" iyadoo jidka loo marayo Dhammaadka Gaajada lagu rakibay Mall of America si ay ka qaybgalayaashu u soo booqdaan oo u socdaan wakhti kasta
inta lagu guda jiro bisha November. Socodka dariiqa mallku waa madadaalo, hab qoys-saaxiibtinimo leh oo lagaga qayb qaadan karo dhacdada, laakiin looma baahna.
By ku biirista Cunnooyinka Shaagagga ee Socodka lagu dhammeeyo Gaajada, waxa aad siinaysaa jaarkeena waaweyn cunto nafaqo leh wakhti ay aad ugu baahan yihiin. Barnaamijyada Cunnada Gawaarida ee Magaalooyinka Mataanaha ah ayaa bixiya in ka badan 500,000 oo cunto ah sannadkii in ka badan bilowgii COVID-19 Faafida. Dhammaan lacagta la ururiyey waxay si toos ah ugu noqotaa Cunnooyinka Taayirrada!
Taageeradaadu waxay gacan ka geysanaysaa hubinta in deriskaaga waayeelka ah ay helaan nafaqada ay u baahan yihiin, oo ay helaan qof soo booqda iyaga oo si gaar ah u go'doonsan. Mid kasta oo $6 ah oo aan kor u qaadno wuxuu caawiyaa in cuntadu gacanta u gasho mid ka mid ah deriskayada wuxuuna ka caawiyaa inay ku noolaadaan gurigooda.
Waxaan rajaynaynaa inaad ka fikirayso inaad u lugayso Cuntooyinka ku Saran Gawaarida ama ku deeqid si aad ugu keento adeeggan muhiimka ah dhammaan waayeelka maxalliga ah ee u baahan!
Ku dar jadwalka
Noofambar 1, 2021